Azu bụ weebụsaịtị nke AB Internet, ọkachamara na ụdị azụ dị iche iche dị iche iche yana nlekọta ha chọrọ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmụ ka esi elekọta ha nke ọma, anyị ga-akuziri gị otu esi eme ya ka ị nwee ike ịnụ ụtọ aquariums dị ka nke a na-emebeghị. You ga-atụ uche ya?
Ndị otu nchịkọta akụkọ nke De Peces mejupụtara otu ndị nwere ezi mmasị n'ịkụ azụ, ndị ga-enye gị ndụmọdụ kachasị mma ka ị nwee ike ilekọta ha nke ọma. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị iso anyị rụọ ọrụ, mezue ụdị ndị a anyị ga-abịakwute gị.
Mụ sayensị gburugburu ebe obibi mere ka m nwee echiche dị iche banyere ụmụ anụmanụ na nlekọta ha. Abụ m otu n'ime ndị na-eche na ị nwere ike ịnweta azụ dị ka anụ ụlọ, ọ bụrụhaala na e nyere ha nlekọta ụfọdụ ka ọnọdụ obibi ndụ ha dịka usoro okike ha si dị, mana na-enweghị nkwarụ na ha ga-adị ndụ ma chọọ nri. Ofwa nke azụ bụ ihe na-adọrọ mmasị na m ị ga-enwe ike ịchọpụta ihe niile gbasara ya.
Abụ m onye Colombia, hụrụ ụmụ anụmanụ n'anya na azụ karịsịa. Enwere m mmasị ịmara ụdị ụdị dị iche iche, na ịmụta ilekọta ha dịka m nwere ike na m maara iji mee ka ha nwee ahụike na obi ụtọ, ebe azụ, ọ bụ ezie na ọ pere mpe, chọrọ nlekọta ka ọ dị mma.
Azụ bụ ihe ndị ahụ magburu onwe ha ị nwere ike iji wee hụ ụwa site n’ụzọ ọzọ ruo n’ókè nke ịmụ ọtụtụ ihe banyere omume ha. Animalmụ anụmanụ na-adọrọ mmasị dị ka ụwa mmadụ na ọtụtụ n'ime ha na-enye gị ịhụnanya, ụlọ ọrụ, ikwesị ntụkwasị obi na karịa ihe niile ha na-akụziri gị na maka oge ụfọdụ ha nwere ike iwepụ ume gị. Agbanyeghị, anyị echefughị ​​azụ na omume ha, ọ bụ ya mere m ji nọrọ ebe a, dị njikere isoro ụwa a kerịta ọmarịcha.
N'ịbụ onye nwere ọmịiko maka ọdịdị na ụwa anụmanụ, enwere m mmasị n'ịmụ na ịkọ ihe ọhụrụ banyere azụ, anụmanụ ndị nwere ike isi ike nghọta, kamakwa ndị mmadụ. Ma ọ bụrụ na ịmara otu esi emeso ha, azụ gị ga-adị mma maka ndụ.
Enwere m mmasị na azụ ruo ogologo oge. Ma ndị dị ọkụ ma ndị oyi, ndị ụtọ ma ọ bụ nnu, ha niile nwere njirimara na ụzọ ịbụ ndị na-atọ m ụtọ. Gwa ihe niile m maara banyere azụ bụ ihe na-atọ m ụtọ.
Ọ na -amasị m ishi mmiri na igwu mmiri n'oké osimiri mgbe enweghị azụ mmiri. Azụ shark so na ndị bi na mmiri kacha amasị m, ha mara mma nke ukwuu! Ha na -egbukwa mmadụ ole na ole karịa aki oyibo!
Enwere m obi ụtọ ide banyere ụmụ anụmanụ ma na-achọsi ike banyere ụwa nke azụ, nke na-eduga m na nyocha ma chọọ ịkọrọ m ihe m maara banyere ha.
A mụrụ m n’afọ 1981 ma hụ ụmụ anụmanụ n’anya, karịchaa azụ. Enwere m mmasị ịmara ihe niile gbasara ha, ọ bụghị naanị otu ha si elekọta onwe ha, kamakwa otu omume ha si dị. Ha na-achọkarị ịma ihe, ọ bụrụ na ha akpachaghị anya, ha ga-enwe ezigbo obi ụtọ.